Ghimob wuxuu kabilaabanayaa wadanka Brazil maadama uu malwarey diirada saaray barnaamijyada bangiyada | Androidsis
Manuel Ramirez | | Noticias, Amniga
Haweeney la shaqeysa shabakadaha adduunka iyo ilaalinta xogta
Ma noqon doonto kii ugu dambeeyay khayaanada loo yaqaan 'Ghimob' ee la timaadda Android, laakiin waa digniinta saxda ah si aan had iyo jeer u tixgalino halka aan ka soo dejino APKS barnaamijyada iyo ciyaaraha.
Waana taas baarayaasha amniga Waxay soo heleen Trojan cusub oo basaasi kara oo xadi kara xogta iyada oo loo marayo 153 codsi oo ku saabsan Android. Fariin cusub oo laga helay Brazil oo si caalami ah ugu faafaya dalkan.
Waxaa loogu magac daray 'Ghimo', wax walba waxay umuuqdaan inay taasi muujinayaan waxaa soo saaray isla kooxda ka dambeysa khayaanada 'Astaroth' (Guildma) oo ku socota Windows. Kaspersky wuxuu ahaa shirkad ka dambeysa daabacaadda raadinta taas oo mar kale na dhigeysa ka hor ogeysiiska asalka APK-ka barnaamijyada iyo ciyaaraha aan rakibno.
Kaspersky ayaa sheeganeysa in Trojan cusub ee Android lagu siiyay xirmooyinka soo dejinta laga dhex helay barnaamijyada Android ee xaasidnimada leh ee websaydhyada iyo server-yada ay hore u isticmaali jireen Astaroth.
Haa, waligeed lama ogaanin barnaamij kasta oo loo adeegsaday dukaanka rasmiga ah Barnaamijyada Google Play iyo ciyaaraha, markaa haddii aad badanaa ka wada rakibtid dhammaantood ishaas, uma baahnid inaad wax ka walwasho.
Ghimob wuxuu adeegsan jiray emayllo iyo boggag xun si uu ugu gudbiyo dadka isticmaala bogagga ay barnaamijyadan "cudurka qaba" ay ka soo baxaan. Xaqiiqdii waxay "isqariyaan" sida haddii ay yihiin barnaamijyada Google oo leh magacyo sida Google Defender, WhatsApp Updater ama Flash Update. Haddii sabab kasta ha noqotee aan ku galnay dabinka, dhibaatadu waxay ku jirtaa in barnaamijyadan la siiyo oggolaanshaha adeegga Helitaanka, tallaabada ugu dambeysa ee habka "cudurka".
Iyada oo qalabka cudurka qaba, mid ka mid ah barnaamijyadan waxay baari lahaayeen liiska 153 si ay u muujiyaan bogag been abuur ah ka mid noqoshada oo sidaas lagu xado aqoonsiyada. Xaqiiqdiina dhamaan barnaamijyada la ogaaday waxay bartilmaameedsadeen bangiyada Barasiil inay xadaan xogta markay isticmaalayaan barnaamijyadan mobilada ah.
Kaspersky ayaa sidaa sheegay kaliya maahan inay sii joogaan bangiyada BrazilTaa baddalkeeda, Ghimob wuxuu ku faafay Jarmalka 5 barnaamij, Portugal oo leh 3 barnaamij, Peru labo labo, Paraguay oo leh 2 kale, iyo Angola iyo Mozambique oo leh mid kale wadankiiba.
Sidaas ayaan u dhigay ogeysiis ku saabsan websaydhyada bixiya soo dejinta APK-yada (maahan dabcan, sida APKMirror waxtar leh), in sifiican diirada loo saaro barnaamijkee aan soo degsanayno iyo maxaa, maxaa yeelay waxay qaadaan halista dhammaan noocyada khayaanada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Amniga » Fariimo 'Ghimob' cusub ayaa bartilmaameedsanaya barnaamijyada bangiyada
Firefox Lockwise waa maamule sir ah oo aamin ah